यस्ता आचरण भएका व्यक्तिले अत्याधिक सम्बन्ध राख्छन्, जानीराख्नुहोस् — SuchanaKendra.Com
यस्ता आचरण भएका व्यक्तिले अत्याधिक सम्बन्ध राख्छन्, जानीराख्नुहोस्
एजेन्सी । कस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरुले बढी सहवास गर्लान् त ? यो धेरै चासोको विषय हुनसक्छ । समाजमा आचरण खराब भएका व्यक्तिहरु धेरै सहवास गर्ने धेरैको सोचाइ हुनसक्छ । तर, हालै प्रकाशित ‘द ब्रिटिश जर्नल अफ साइकोलोजी’ मा दयालु आचरण भएका मानिसहले सबैभन्दा धेरै सहवास गर्ने जनाएको छ ।
उनीहरुको मिलनसार स्वभावका कारण पनि धेरैको मन जित्न सक्ने तथा सहवासका लागि पनि उत्कृष्ट हुने उक्त अध्ययनमा जनाइएको छ । अध्ययनका लागि १९२ जना एकल महिला र १०५ जना एकल पुरुष लिइएको थियो । उनीहरुले डेटिङ तथा मेटिङमा पाएको सफलताका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको हो ।अध्ययनका क्रममा यसको मामिलामा पनि राम्रा आचरण भएका पुरुषहरु अगाडि देखिएका थिए । जति मानिसको असल थिए त्यति नै उनीहरुले नै बढी स्मार्ट गर्ने निष्कर्ष अध्ययनमा पाइएको थियो । उनीहरुमा स्वार्थ कम हुने भएका कारण पनि पार्टनर भेटाउन सजिलो हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस :कान्छी च्याप्दै कमरेडहरू कुलेलम
जनयुद्धकालमा पाँचांै डिभिजन कमाण्डर थिए सुनील थापा । ०६२ मंसिरमा रोल्पा जिनावाङको हवाई आक्रमणमा मारिए । उनकी श्रीमती रोल्पास्थित उनकै नाममा कायम गरिएको सुनील स्मृति गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिन् । छोरा विजय पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य थिए । पार्टी फुट्दा वैद्यतिर लागे । वैद्यबाट निस्क्रिय भए । आमाचाहिँ प्रचण्डकै पार्टीमा । विजयले पहिलो पत्नीबाट सन्तान जन्माएपछि अर्कीसँग घरजम गरे । पहिलो पत्नीको कुनै वास्ता छैन । अर्को श्रीमतीबाट पनि बच्चा जन्मिएका छन् । पहिलो पत्नी जनयुद्धबाटै आएकी हुन् । उपराष्ट्रपति, सभामुख, अनेकथान मन्त्रीको जिल्ला ! द्वन्द्वकालमा साँस्कृतिक बिचलन गर्ने भन्दै श्रमशिविरमा पठाउने, मोसो दल्ने, चारपाटा मु’ड्ने यिनै अनि कम्युनिष्टको ‘क’ पनि उच्चारण गर्न नजान्ने नक्कली मायालुसँग रम्नु–जम्नुपर्ने पनि यिनैलाई !त्यही गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्, गुणिन्द्र घर्ति । उनका पनि दुई पत्नी छन् । बहुविवाहमा पार्टीबाट एक वर्ष निलम्बन भएका थिए । फुकुवापछि गाउँपालिका अध्यक्ष जिते । मणिराम बुढाथोकी गाउँपालिका पार्टी कमिटीका अध्यक्ष हुन् । उनकी त झन् तीन–चारवटी पत्नी । रोशनी शाहीसँगको सम्बन्धका कारण पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेपछि काठमाडौं आउँदा ‘हामीले गल्ती ग¥यौँ भनेको त ठीकै पो गरेका रहेछौँ’ भन्दै हाँसिरहेका थिए ।
यो रोग प्रदेश ५ का आन्तरिक मन्त्री कूलबहादुर केसी (सोनाम) सम्म पुगेको छ । उनका पिए हुन्, पवन कुँवर । छोरा र पत्नी दाङमा राखेर मन्त्रीको सेवा गर्न बुटवल बस्छन् । अर्कीसँग विवाह भएको छैन । तर, विवाहबाहेकका सबै कुरा चल्ने गर्छ । दाङमा बस्ने छोरा र पत्नीको मतलब छैनमात्रै होइन, उनीहरू बुटवल पुग्दासम्म भेट्दैनन् । यो रोगबाट विप्लव माओवादी पनि चोखो रहन सकेन । हाल नख्खु कारागारमा कैद मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन) ले जेठी पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेद नै नगरी कान्छी ल्याइदिए । माओवादी स्कुलिङका पूर्वमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ सबै दृष्टिले सक्षम र उत्तम मानिएकी पत्नी हुँदाहुँदै अखिलकी कोरली केटी केन्द्रीय सदस्य सुपेक्षा सिलवाललाई च्यापेर हिँडेपछि राजनीतिक रुपले समाप्तप्रायः स्थितिमा छन् ।